Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. निमोनियाले मिर्गौला र कलेजोसम्म असर पार्न सक्छ – Emountain TV
निमोनिया किन हुन्छ ?
निमोनिया फोक्सोको संक्रमण हो । यसको संक्रमणले फोक्सोका कोष सुन्निएर हावा भरिने क्षेत्र थुनिन्छ । यो रोग रोग विभिन्न जीवाणु, औद्योगिक रसायन आदिका कारण हुन्छ । यसमा मुख्य कारण जीवाणुको संक्रमण नै हो ।
यो रोगका लक्षणहरू के के हुन् ?
बिरामीको उमेर, रोग फैलाउने कीटाणु, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अनुसार यसका लक्षणहरू फरक हुन्छन् । सामान्य हल्काफुल्का निमोनिया छ भने त्यस्तो अवस्थामा रुघाखोकी लाग्ने, छाती दुख्ने, ज्वरो आउने आदि लक्षण देखिन्छन् । यो रोगको संक्रमण अत्यधिक भएर अवस्था गम्भीर भइसकेको छ भने काम ज्वरो आउने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने, थकान लाग्ने, खान मन नलाग्ने, टाउको दुख्ने, पँहेलो खकार निस्किने, खकारमा रगत देखिने आदि लक्षण देखिन्छन् ।
निमोनियाको उपचार पद्धति के हो ?
बिरामीको अवस्था हेरेर उपचार पद्धति फरक हुन्छ । सामान्य बिरामीलाई औषधि दिएर घर पठाउन सकिन्छ भने केहीलाई अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । सामान्य अवस्थामा चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम घरमै हेरचाह गर्न सकिन्छ ।
निमोनियाबाट कसरी बच्ने ?
निमोनियाबाट बच्न एन्टी भाइरस भ्याक्सिन लगाउन मिल्छ । यसबाहेक तातो लुगा लगाउने, चिसो र भीडभाडबाट बच्ने, खानपिनमा ध्यान दिने, जीवनशैली सुधार्ने, मास्क लगाउने, उमालेर पर्याप्त पानी पिउने, मुख र छालाको सरसफाइमा ध्यान दिने आदि गर्नाले निमोनियाबाट बच्न सकिन्छ । बच्चालाई जन्मेको ६ महीनासम्म आमाको दूध मात्र र त्यसपछि २ वर्षसम्म अन्य खानेकुरा सहित स्तनपान पनि गराउनुपर्छ । यसले बच्चामा पोषणको अभाव हुन नपाएर निमोनिया धेरै हदसम्म कम हुन्छ । बच्चाहरू निमोनियाबाट धेरै प्रभावित हुने भएकाले बच्चालाई लगाउनुपर्ने सबै खोप लगाउनुपर्छ । धूलो, धूँवा र प्रदूषणबाट बच्नुपर्छ । यो सरुवा रोग भएकाले सकेसम्म भीडभाडमा हिँड्ने गर्नु हुँदैन । बिरामीले जथाभावी खकार फाल्नुहुँदैन र हाछ्युँ गर्दा पनि मुख छोप्नुपर्छ ।
निमोनिया कत्तिको खतरनाक हुन्छ ?
यो रोगका विभिन्न चरण हुन्छन् । समयमै यसको रोकथाम गर्न सकियो भने निको हुन्छ । तर कहिलेकाहीँ यसको संक्रमणबाट फोक्सामै पीप जम्ने, फाक्सोभन्दा बाहिर पानी जम्ने, संक्रमण फैलिएर रगत, मुटु तथा मस्तिष्कमा पुग्ने आदि हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा रोग बढी जटिल भई खतरा बढ्दै गएर मिर्गौला र कलेजोमा असर गर्ने, रक्तचाप घट्ने, अक्सिजनको मात्रा घट्ने आदि समस्या आउन सक्छ, जुन एकदमै खतरनाक अवस्था हो । सामान्य निमोनियामा उपचार गर्दागर्दै पनि १ प्रतिशत जति बिरामीमा यो रोगले गम्भीर असर पु¥याउन सक्छ । अवस्था जटिल भएमा ३० देखि ५० प्रतिशत बिरामीलाई यसले गम्भीर असर गर्न सक्छ ।
सामान्य रुघाखोकी र निमोनिया कसरी छुट्ट्याउने ?
सामान्य रुघाखोकी लाग्दा आँखा रातो हुने, जीउ दुख्ने, सामान्य ज्वरो आउने लगायत लक्षण देखिन्छन् । तर निमोनियमा चिसो महसूस हुनेगरी अत्यधिक ज्वरो आउने, खकार आउने, छाती दुख्ने, श्वास फेर्न गाह्रो हुँदै जाने, थकान बढ्दै जाने लगायत लक्षण देखिन्छन् ।
यो रोग कस्तो मौसममा देखिन्छ र कुन उमेर समूहका व्यक्ति बढी प्रभावित हुन्छन् ?
यो रोग १२ महीनै हुन सक्छ । तर चिसो मौसममा बढी देखिन्छ । बच्चा र वृद्धहरूलाई यो रोग लाग्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका मानिसमा यो रोगका जीवाणु छिटो फैलिन्छन् । दम, एचआईभी एड्स, मधुमेह आदि रोगका बिरामीलाई यसको संक्रमण छिटो हुन्छ ।
निमोनिया भएपछि कति समयभित्र अस्पताल पुग्नुपर्छ ?
सामान्य रुघाखोकी लगायत लक्षण देखिएमा एक/दुई दिन पर्खिन सकिने भए पनि श्वास फेर्न गाह्रो हुने, खकारमा रगत आउने, खकार पँहेलो पाकेको जस्तो देखिने, खकार गन्हाउने, छाती घ्यारघ्यार हुने, बच्चाको कोखा हान्ने (श्वास फेर्दा छाती र करङको भाग भित्रपट्टि धस्सिने) आदि लक्षण देखिएमा तुरुन्त अस्पताल पुगेर चेकजाँच गराउनुपर्छ । समयमै उपचार भएमा यो रोग पूर्णरूपमा निको हुन्छ ।
यो रोगबारे तपाईंका सल्लाह–सुझाव छन् ?
बच्चा र वृद्धलाई निमोनियाले असर गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसैले माथि भनिएका लक्षण देखिएमा समयमै यसको चेकजाँच तथा उपचार गराउनुपर्छ । एन्टी भाइरस भ्याक्सिन लगाएर पनि यसबाट बच्ने सावधानी अपनाउन सकिन्छ । निमोनिया बढ्दै जाँदा जटिल बन्ने गर्छ । त्यसो हुँदा यो रोगलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन । सन्तुलित खानपिन गर्न र स्वस्थकर जीवनशैली अपनाउन सबैलाई अनुरोध गर्छु । यो समाचार आजको अभियान दैनिकमा लेखेको छ ।